के उपचारको जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको हो सरकार ? – KhojPatrika
के उपचारको जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको हो सरकार ?
खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ बैशाख १९, ०९ :३८ बजे
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारबाट सरकार पछि हटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जनताको ज्यानजोगाउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप लागेको छ । संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल र शैया उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको घोषणाले सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संक्रमणको बढदो दरलाई देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने बताँएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।
दैनिक संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमित भएकाहरुलाई उपचार र त्यसमा पनि अक्सिजनको आवश्यकता देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल र शैया उपलब्ध गराउन नसक्ने घोषणा गरेपछि सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् । सरकारले अस्पतालमा शैयाको अभाव भएको भन्दै उपचार गर्न नसक्ने र आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा आफै गर्न अपिल गरेको थियो । यस्तो अपिललाई प्रतिपक्षी दलहरुले पनि रुचाएका छैनन् ।
अपठ्यारो अवस्थामाजनतालाई भरोसा प्रदानगर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार आफै पञ्छीन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको छ । सरकारलाई समर्थन र आलोचना दुवै गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई संवेदनहीनको आरोप लगाएको छ ।
केही समय पहिले सम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका अहिलेका संस्कृती पर्यटन तथा नागरीक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग यसबारे जवाफ माग्दा खासै चासो दिएनन् । उनले विज्ञप्ति निकाल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग नै यसको जवाफ माग्नुपर्ने भन्दै पन्छिन खोजे । शुक्रबार स्वास्थ्यतथा जनसंख्यामन्त्रालयले विभिन्न २२ जिल्लामा डरलाग्दो गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिइरहेको भन्दै अब उपचारको व्यवस्था नै गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो । मन्त्रालयको यो भनाईलाई धेरैले गैरजिम्मेवार भनेका छन् ।
ट्याग : #कोरोना संक्रमण, #शैया उपलब्ध गराउन नसक्ने